Anatin’ny Fifidianana Ao Pakistana, Fampijaliana Biby Ho An’ny Seho Pôlitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2018 12:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, polski, русский, English
Alika iray nofonosina tanatin'ny sainan'ny vondrona pôlitika iray ary notifirina. Pikasary avy amin'ilay lahatsary navoakan'ny Innocent Pets Shelter Welfare Society teo amin'ny Facebook.
Nampijaly biby ireo mpikatroka ao Pakistana nandritra ary taorian'ny fifidianana tamin'ny 25 Jolay 2018 mba hiezahana handefa hafatra pôlitika, nozaraina tety amin'ny aterineto ny sary tami'ireo seho.
Hita amin'ny sary ireo nandoko, nikapoka ary namono biby izay nampiakanjoina mba hisolo tena an'ireo mpifanandrina pôlitika ao anaty fampielezankevitra izay efa voasimban'ny herisetra. Nisy fanafihana tamin'ny baomba samy hafa nikendrena ireo famoriambahoaka ara-pôlitika izay namoizana ain‘olona mihoatra ny 150 talohan'ny fifidianana ny 25 Jolay.
Mpanao cricket taloha nivadika ho pôlitisiana Imran Khna no mety ho lasa praiminisitr'i Pakistana manaraka rehefa vitan'ny antokony Pakistan Tehreek-i-Insaf (“Hetsika Pakistana Ho An'ny Rariny”, fantatra amin'ny hoe PTI) ny niantoka ny fahazoana ny ankamaroan'ny seza tamin'ny fitsapankevitra, nandresy an'ireo mpitondra taloha avy amin'ny Ligin'ny Silamo ao Pakistana Nawaz (PML-N).
Ao anatinà horonantsary iray (Tandremo: sary mahery setra mampiseho fampijaliana biby) izay niely be tamin'ny 27 Jolay, alika iray nosaronana tamin'ny saina PTI no hita in-telo notifirin'ny lehilahy mitondra ny sainan'ny vondrona Watan Qaumi (QWP), no sady toy ny voahodidin'ireo azo lazaina hoe mpanohana an'ilay kandidà resy.
Taorian'ireo fanehoankevitra tao amin'ny tambajotra sosialy, nisambotra olona roa noahiahiana tao amin'ny tanànan'i Bannu, izay toerana nandraiketana an'ilay horonantsary, ny polisin'ny distrikàn'ny Khyber Pakhtunkhwa ary avy eo namoaka fiaikenkelok'ireo lehilahy roa.
Namaly tao anatin'ny 12 ora, niasa nandritra ny alina tontolo ny Polisin'ny #Bannu mba hisamborana tamin'ny 6:45 maraina an'ireo 2 voarohirohy tamin'ilay fampijaliana, famonoana biby ary fandraketana lahatsary momba izany. Misaotra an'ireo mpampiasa Tambajotra sosialy ny #KPPolisy tamin'ny fandraisana andraikitra.
Ny Lalàna Mandràra ny Fampijaliana Biby, navoaka tamin'ny 1890, dia nasiana fanitsiana tamin'ny voalohan'ity taona ity mba hampidirana lamandy mavesatra kokoa ary famonjàna tonga hatramin'ny telo volana an-tranomaizina. Izao no voalohany nampiharana ireo sazy vaovao ireo.
Ilay mpifaninana resy, izay ny sariny no hita teny amin'ny saina nentin'ireo mpitifitra, no namoaka horonantsary (amin'ny Pashto, fiteny iresahan'ny 15 isan-jaton'ny mponina ao Pakistana) manameloka an'ilay fihetsika ary miteny fa tsy nanana fifandraisana tamin'ireo olona tao anatin'ilay horonantsary izy.
Namoaka hevitra ihany koa izy hoe mety nataon'ireo mpifaninana aminy ilay lahatsary mba hanalàna baraka azy, ary nangatahany ny hisian'ny fanadihadiana.
Ny kandidà QWP avy ao amin'ny Bannu tao anatin'ny hafany anaty lahatsary no niteny fa tsy nahatezitra azy ny vokatrin'ny fifidiana ary ny fangalarana vato, raha ampitahaina amin'ny nahitana an'ity lahatsary nataon'ny olona tsy misy antra mitifitra alika miaraka amin'ny saina PTI ity, tamin'ny filazana fa mpanohana azy.
Amin'ny sary iray hafa izay nalaza teo amin'ny Twitter koa, lehilahy iray mitana goaika amin'ny tongony raha etsy ankilany misy andian'olona mankalaza ny fandresen'ny PPP teo an-toerana:
Ny mpanao pôlitika tsy tia PPP Arbab Rahim, nantsoin'ny mpanohana PPP ho “goaika mainty” noho ny volonkodiny matroka.
Ao amin'ireo sary ireo, mankalaza ny fandresen'ny PPP amin'ny famonoana/fampijaliana an'ilay goaika ireo mpanohana ny PPP.
Ao Karachi, nosoratan'ny olona teo an-damosin'ny ampondra iray ny anaran'ny kandidà mpifaninana ary nokapohina ilay biby. Taorian'ireo fihetsehampo nivaivay tao amin'ny tambajotra sosialy, nalain'ny ekipan'ny Orina Ho Famonjena ny Biby ho any amin'ny fialofany ilay ampondra (boriky), ary tao no nanomezana azy ny anarana ‘Hero’
Miaraka amin'ireo fifidianana hoavy manantona antsika, tsy misy afaka mandositra ny hatezerana amin'ity fotoana ity…na ny biby tsy afaka miaro tena aza. Heloka bevava feno fankahalana ito. #Boriky iray voakapoka nivoa-drà, im-betsaka nomena totohondry teny amin'ny lohany ary kibony, rotika ny orona, voadakadaka teny amin'ny tenany manontolo mandra-pidarabony
Indrisy, tsy tafavoaka velona tamin'ilay fidarodarohana ilay boriky.
Maty teo ilay “Hero”-nay.
Efa nihatsara izy hatramin'ny omaly, nahavita nitsangana samirery, nihinana sakafo namainina na dia tapaka aza ny valanoranony, ary nisotro rano irery. Notsindronina an-tsosonkoditra izy, nampidirana vitaminina maro sy antibiotika. Efa sitrana ny ratra ivelany..
Betsaka ny olona nampiseho ny hatezerany teo amin'ny tambajotra sosialy momba ny fampijaliana biby. Nibitsika ilay mpisolovava, Yasser Latif Hamdani:
— Yasser Latif Hamdani (@theRealYLH) July 28, 2018.
Afaka nirehareha tamin'ito firenena ito aho raha mba nanao ny tokony nataony ny Lehiben'ny Fitsarana eto Pakistana tamin'ity ary naka ny fanapahankeviny azy manokana momba ny famonoana biby amin'ny fomba feno habibiana nandritra ary taorian'ity fampielezankevitra ho an'ny fifidianana ity.
Tamin'ny fifidianana natao teo aloha teto amin'ny firenena, tamin'ny 2013, tigra fotsy iray no nentina nandehandeha tamin'ny famoriambahoakan'i Mariam Nawaz — ny zanaka vavin'i Nawaz Sharif, mpitarikan'ny PML-N — matin'ny havizanana tao ambanin'ny hafanana.
Tamin'ny fitsapankevitra tamin'ity taona ity koa, nitondra liona tao amin'ny faripiadidiny ny kandidàn'ny PML-N, niteraka fanakianana ihany koa.
Tao anaty resadresaka tamin'ny Global Voices, nisaintsaina momba izay antony tsy mahavoasazy ireo mpampijaly biby i Naeem Abbas, tomponandraikitry ny fisoloana vava avy amin'ny Brookes Pakistan :
Nampijaliana foana ireo biby, fa voalohany izao ny polisy no niditra an-tsehatra tanatinà tranganà fampijaliana biby. Ary manana kolontsaina isika hoe raha misy olona tratra dia ho tafavoaka amin'ny fandoavana tsolotra izy.